COVID-19: Isbedelada Kiisaska Magareeshinka Maxkamaddaha Magareeshinka Court, USCIS, iyo ICE | LawHelp Minnesota
COVID-19: Isbedelada Kiisaska Magareeshinka Maxkamaddaha Magareeshinka Court, USCIS, iyo ICE
Markii ugu dambeysay ee wax la soo geliyey: 2020/11/03
Maxkamadda Magareeshinka (Immigration Court)
Maxkamaddaha Magareeshinku weli ma furan yihiin?
Intooda badan maxkamaddaha magareeshinku waa ay furan yihiin, laakiin, qaar ka mid ah dacwadaha dhageysigoodii waa la baajiyey. Hadii dacwadaaddii la baajiyey, mar kale ayey dib u qaban doonaan balanteeda.
Waxaad ka arki kartaa maalin walba wixii ku soo kordha shabakada (website) maxkamadaha magareeshinka. Wixii soo cusboonaada waxaa lagu soo qora goobta maxkamada: https://www.justice.gov/eoir/eoir-operational-status-during-coronavirus-pandemic.
Maxkamaddu waxay soo gelisaa wixii soo kordha bogga (Facebook): https://www.facebook.com/doj.eoir/.
Waa maxay dhageysiga dacwadaha hayn la’aanta ahi?
Dhageysiga dacwadaha hayn la’aantu macnaheedu waa uma xirnid laanta socdaalka (immigration).
Sidee ayaan u eegi karaa waqtiga dacwadayda la dhageysanayo?
Waa ogaan kartaa kolka dacwadaadda la qaadayo hadii aadka wacdo khadka 1-800-898-7180 ama waad ka eegi kartaa shabakada (online): https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem/Form?Language=EN. Si aad u ogaato waqtiga dhageysiga dacwadaadda, Waxaad u baahan tahay A Lambarkaaga “A Number” oo ah lambarka 9-ka tiro ka kooban, ee ka bilowda xarafka A. Waxa uu ku qoran yahay warqadahaaga magareeshinka. Waxaa dhici karta inuu u eg yahay sidan oo kale: A208-000-000.
Kolka aad wacdo ama aad ka eegto khadka (on-line) ka waa inay yiraahdaa waxaad leedahay dacwo dhageysi ama dacwi qaadid adiga kaligaa kuu ah. Waxa ay isku dayayaan inay cusboonaysiiyaan balamaha ku jira khadadka telefoonada ama kuwa (on-line) ka, laakiin muddo ayey qaadan taasi. Hadii balan fog laguu qabtay, waxaa dhici karta inay taasi iska caadi tahay.
Goorma ayaan heli doonaa waqtiga cusub oo dhageysiga dacwadayda la qaadayo?
Hadii kiiskaaga dib loo dhigay, maxkamaddu waxa ay kuu soo diri ogaysiiska balanta cusub ugu yaraan 10-cisho ka hor waqtiga cusub ee dacwadaadda la qaadayo. Fadlan hubi inaad boostada eegto aadna u sheegto iyaga hadii aad guurto.
Sidee ayaan ugu sheegaa ciwaankayga cusub magareeshinka?
Hadii aad guuto ama aad guuri doonto dhawaan, hubi inay maxkamaddu hayso ciwaankaaga cusub. Buuxi foomka ciwaan bedelida ka dibna boostada u dhig maxkamadda. Hadii kiiskaagu uu Minnesota ka socdo, foomkaan waxaa laga buuxin karaa: https://www.justice.gov/eoir/file/640016/download.
Hadii kiiskaaga Magareeshinku uu ka socdo gobol kale, ka hel foomka saxda ah halkan: https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-immigration-court-listing#Minnesota.
Maxaan u baahnahay si aan maxkamadda dacwo uga xareeysto?
Hadii maxkamaduhu sii furnaadaan, kolkaa waad tagi kartaa oo warqadadahaaga dacwada gacanta ayaad uga dhiibi kartaa. Sidii kale dacwadaadda waxaad boostada u dhigi kartaa maxkamada. Hadii mudadda la rabo inaad dacwadaadda ku soo xareysaa aysan aad u dhaweyn, boosto dhigida ayaa fiican.
Ka waran hadii aan u baahnahayn inaan la xiriiro maxkamadda?
Hadii kiiskaagu uu ka socoto Minnesota, waxa aad ka wici kartaa 612-725-3765. Kaliya wac hadii aad leedahay balan maxkamadeed oo aadan tagi karin ama waqti kaa dhacaya oo aadan oofin karin.
Hadii aadan Minnesota joogin, ka hel telefoonka maxkamada aad wacayso shabakada (website): https://www.justice.gov/eoir/eoir-immigration-court-listing#MN.
USCIS waa xafiis magareeshinka ka tirsan oo dhameeya:
Degnaaanshaha rasmiga ah (green cards)
Qaar ka mid ah kiisaska magan-gelyada
Dukumiintiyada socdaalka ee qaxootiga, iyo
Codsiyada keenitaanka wadanka ehelada.
Ma furan tahay USCIS?
Xafiisyada hay’ada USCIS waxa ay hadda bilaabayaan inay dib u furaan balamihii lagu tagi jiray xafiisyadooda. USCIS waxa ay hadda u diraysaa ogaysiisyo dadkii balamahii iyo wareysiyadii loo baajiyey cudurka COVID-19 awgii lahaa. Xafiisyada hay’ada oo dhan dib isku mar looma wada furayo. Gal shabakada USCIS office closure page si aad uga eegto in xafiiska deegaankaagu uu furan yahay.
Kuwaa waxaa ku jira balamaha:
wareysiyadii magan-gelyada (ee xafiiska magan-gelyada)
xafladahii dhaarta dhalasho qaadashada
balamahii kiiska qofka wax looga waydiin jiray
Waxaad u baahan tahay balan si aad u tago xafiiska USCIS oo aad wax uga waydiiso kiiskaaga ama aad warqado ugu gayso. Waxaad ka heli kartaa wixii ku oo kordha xafiisyada USCIS shabakadooda (web): https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus-disease-2019-covid-19.
Ka waran hadii balantaydii la baajiyey?
Dhamaan balamihii iyo wareysiyadii waqtigoodu u dhaxeeyey Maarso 18 – Juun 4 dib ayaa loo dhigay. Waxa aad uga heli doontaa balan waqti cusub ah boostada hay’ada USCIS.
Balamaha fara-qaadida ee Rugaha Gargaarka Codsiyada waa la wada baajiyey dib ayaana loo qaban doonaa.
Xafladaha qaadasha dhalashada ee dib loo dhigay iyana mar kale ayaa balantooda dib loo qaban doonaa.
Hadii aad guurtay ama aad dhawaan guurayso, hubi inaad cusboonaysiiso ciwaankaaga, si kolkaa aad u hesho wixii ogaysiisyo ah ee ku saabsan kiiskaaga. Ka eeg warqadayada xaqaa’iqa ku saabsan Ciwaan Bedelida Change of Address.
Sugida amaanka waqtiga balamaha
Hay’ada USCIS waxa ay samaysay isbedelo si ay uga ilaaliso cid walba Coronavirus. Qaar ka mid ahina waa:
Ha imaan balan hadii aad leedahay astaamaha cudurka COVID-19
Kaliya 15 daqiiqo ka hor mar waqtiga balantaadda
Xiro maaskaro ama wax kale oo daboola sankaaga iyo afkaaga
Yaree dadka kuu soo raacaya balantaada
Ogaysiiska balantaada ama wareysigaaga waxaa weheliya tilmaamo amaan-sugid ah oo ka socda xafiiska aad booqanayso.
Ka waran iyadana dirsashada codsiyada?
USCIS weli waa ay wadaa hawlaha codsiyada aysan u baahnayn inay dadkooda la kulmaan. Weli waa aad buuxin kartaa dirina kartaa foomamka, sida foomka warqada shaqada ama codsiga dhalashada.
Ka waran hadii aan qabo su’aalo ku saabsan xaaladda codsigaygu meesha ay marayso?
Waa ka eegi kartaa kiiskaaga xaalkiisa shabakada (online): https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do. Waxaadse u baahan tahay lambarka warqadaha aad xareysay. Waana inuu lambarkaasu ku qornaadaa rasiidka USCIS ay kuu soo dirtay xafiiska ka dib kolkii ay heshay codsigaaga. Waa tirooyinka iyo xarfaha isku laran ee ku kor kaga yaal warqadaa. Waxa ay ku bilaabantaa 3 xaraf, Tusaale ahaan, EAC, WAC, LIN, SRC ka dibna waxa ay leedahay 10 lambar.
Waxaad kaloo wici kartaa rugta la soo xiriirka ee USCIS ee khadkeedu yahay 1-800-375-5283. Waxaad sidoo kale u baahan tahay lambarka rasiidka kolka aad wacayso.
Mas’uuliyiinta magareeshinka iyo ICE
Magareeshinku ma I qaban doonaa hadii aan isbitaal tago?
ICE waxa ay tiri ma tagno isbitaalada ama rugaha caafimaad. Hadii aad jirato, hal daryeel caafimaad.
Ka waran hadii aan la leeyahay balan is-xaadirin ah mas’uul ka tirsan ICE?
Hadii aad leedahay balanta is-xaadirinta caadiga ah, la xiriir xafiiska deegaankaaga ee aad iska xaadiriso. Telefoonka weyn ee xafiiska ICE ee Minnesota waa: (612) 843-8600.
Ka waran hadii an rabo inaad lacag curaar ah ka dhigo qof?
ICE weli waa ay ka aqbashaa dhigida lacagta curaarta ah goobaha xafiisyadeeda ee leh “daaqadaha curaarta” “bond windows.” Kuwaana waxaa ku jira goobta Minnesota ee Sarta dowlada dhexe ee Ft. Snelling. Kaliya qofka dhigaya curaartu waa inuu tago meesha. Hadii aad qabto wax su’aalo guud ah oo ku saabsan curaaraha, Ka eeg warqada xaqaa’iqa curaaraha magareeshinka (immigration Bonds).
Dhageysiga dacwooyinka dadka xiran ma la qabtaa iyaga?
Haa, dhamaan dhageysiga dacwooyinka dadka xiran weli waa la qabtaa.
Xaggee ayaan ka heli karaa akhbaar dheeraad ah oo ku saabsan ICE iyo COVID-19?
Shabakadooda (website): https://www.ice.gov/covid19.